W.Gudaha | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL W.Gudaha – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Madaxweyne Farmaajo oo laamaha amniga faray inay baaris ku sameeyaan dilkii Xil. Cismaan Cilmi Boqorre
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoyska, eheladii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Eebbe ha u naxariistee Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho. “Eebbe ha u naxariisto Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre oo gacan ka xaq darani ku dishay magaalada Muqdisho,...
DHAGEYSO: Madaxweynaha Puntland oo si adag uga hadlay arrimaha Kaalmada Milateri eelasiiyo Somalia.
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlayay maanta xero ciidan oo kutaala magaalada Garoowe, ayaa si adag uga hadlay kaalmada Milateri ee ay Caalamku siyaan Soomaaliya, taas oo uu sheegay in aysan maamulkooda soo gaarin. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay Puntland ishu ku hayso hab dhaqanka la xariira in kaalmooyinka lagu bixiyo magaca Soomaaliyeed...
Feb 23rd, 2019 · 2 Comments
GALKACYO(P-TIMES)- Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo maalmahan dambe safar shaqo ku joogay dalka Keynya ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha oo safarkiisa ka warbixiyay ayaa waxa u sheegay in uu Keynya kula soo kulmay hay’addaha deeq-bixiyaasha ah ayna u balan qaadan in hada kadib Galmudug xaquuqda ay leedahay heli doonto ayna kala shaqeyn doonaan hormarka iyo...
DAAWO:Xabsiga ugu weyn Qaaradda Africa oo Muqdisho laga furay & DFS oo ka hadashay heerarkii uu soo maray
MUQDISHO(P-TIMES)- Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), Mudane Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay maanta munaasabadda xuska 49-aad ee aasaaska ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa xarigga ka jaray xabsiga guud ee Muqdisho iyo maxkamad casri ah oo laga hir-geliyay gudaha Taliska Guud ee Asluubta. Xabsiga guud oo la gaarsiiyay heerka xabsiyada caalamka loona dhamaystiray adeegyada...
DAAWO:Muuse Biixi oo safar kaga baxay Hargeysa & Deegaano lagu soo dhoweeyey kadib markii…
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka soo laabtay safarkii Itoobiya ayaa durba bilaabay socdaal uu kumarayo deegaamo katirsan maamulkaasi oo qaarkood si diiran loogu soo dhoweeyey.
DAAWO: M/weynaha Puntland muxuu u sheegay ciidamada Difaaca oo uu maanta booqday?
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu maanta booqday xeraddii lagu asaasay maamulka 21 sanno jirsaday ee uu hadda madaxda ka yahay oo uu ka muuqdo dayactir la’aan baahsan, halkaas waxay saldhig u tahay ciidamada Daraawiishta ee Puntland. Madaxweynaha Puntland wuxuu la kulmay saraakiisha ciidamada kala duwan gaar ahaana Daraawiishta oo ah kuwa inta badan difaaca Xaduudaha...
DAAWO:Garowe oo lagu soo bandhigay maxaabiis hor leh & Ciidamada oo gacanta ku dhigay ilaa 20…..
GAROWE(P-TIMES)- Xili muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo badan oo ka tirsan deegaanada Puntland ay ka socdeen hawlgalo lagu xaqiinayo amaanka ayaa waxaa maanta magaalada Garowe ee caasimada Puntland lagu soo bandhigay dhalinyaro gaadhaysa ilaa 20 qof kuwaas oo ku eedaysan falal amni daro ah sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Police-ka Puntland. Taliyaha saldhiga dhexe Maxamuud Muuse Bila iyo taliyaha...
DAAWO-Kenya oo Ku Hungowdey Dameceedii Boobka Soomaaliya iyo MD Farmaajo oo Ciidanka Amar Siiyey.
Kulanti wanaagsan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya, gaar ahaan khilaafka diblumaasiyadeed ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo meel sare gaarey. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa kamid ah, khilaafka labada dhinac oo meeshii ugu saraysay gaarey, Kenya oo weli hanjabaad u soo diray Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in difaac loo diyaar Garoobo iyo...
Madaxda DFS isku khilaafsan go’aan ay ka qaadan lahaayeen xiisada Kenya & Madaxweyne Farmaajo oo weli taagan mowqif adag oo….
Feb 23rd, 2019 · 5 Comments
NAIROBI(P-TIMES)- Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in madaxda dalka ay isku khilaafsan yihiin jawaabaha laga bixinayo hadalada kasoo yeeraya dowlada Kenya eek u aadan muranka dhul badeedka oo bur buriyey xiriirkii u dhaxeeyay labada dowladood. Shirar aan caadi ahayn oo saacidihii ugu dambeeyay ay yeesheen madaxda dalka ayaa qaar kamid ah wasiiradda xukuumadda Soomaaliya waxay soo jeediyeen in...
DEG DEG:Ciidamada dowladda oo rasaas ooda kaga qaaday dad shacab ah & Dhaawacyo la dhigay cisbitaalka….
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya Isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada dowlada uu furay rasaas, waxaana ku dhawaacmay qof oo dumar ah oo la sheegay in ay shaah ku iibinaysay kaabiga Isgoyska Taleex. Askarigan ayaa baacsanaayay gaari la sheegay in uu isku dayey in uu wadada xoog ku maro sidda ay xaqiijiyeen goobjoogayaal. Dhaawaca haweenayda...
Dowlada Somalia oo war lagu farxay kasoo saartay arin dhibaato ku haysa shacabka oo…
MUQDISHO(P-TIMES)- Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii ay wax uga qaban laheyd Qiimaha Korontadda oo aad u sareeya, islamarkaana ay gacanta ku hayaan Shirkado si gaar ah loo leeyahay. Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshaddaha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay la socoto in Shacabka Soomaaliyeed ay dhibaato...
Villa Somalia qorshe cusub u dhigtay dowladd goboleedyada, hogaamiyaasha Galmudug & Jubbaland oo…..
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxda ugu saraysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dejiyey qorshe ay Villa Somalia ku dooneyso in Heshiis wadajir ah ay la gasho Madaxweynayaasha Maamulada Jubbaland iyo Galmudug. Qorshaha arrintan ayaa la ka socda Madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo lagu wado Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre uu taggo Magaalada Kismaayo, isagoona kulamo...
Qaar kamid ah wadooyinka halbowlaha ah ee caasimada oo saaka xiran & Sababta oo lagu sheegay….
MUQDISHO(P-TIMES)- Qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa saaka xiran, waxaana lasoo dhigay ciidamada dowladda Soomaaliya. Isgoysyadda Taleex, Soobe, Banaadir, Howlwadaag iyo sidoo kale wadooyin kale oo muhiim ah ayaa saaka xiran sida ay warbaahinta qaar u sheegeen dadka degaanka. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa wadooyinka ku jaray gawaarida ciidamada. Qaar kamid ah dadka reer Muqdisho...
Maxay tahay sababta dowlad goboleedyadu uga aamusan yihiin khilaafka Kenya & Somalia?
Feb 22nd, 2019 · 1 Comment
GAROWE(P-TIMES)- Tan iyo shirkii madaxda Soomaalida ee Garoowe 27 January 2019 waxaa soo wanaagsanaanayey xiriirka madaxda dowladda federalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah. Hogaamiyayaasha ayaa shirar goos goos ah oo ay kuyeesheen magaalada Garoowe uga arrinsanayey sidii loo soo afmeeri lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosnaa madaxda DFS iyo dowladaha xubnaha ka ah oo muddo...
Madaxweynaha Puntland oo kusii jeeda Boosaaso & Ujeedka safarkiisa oo…..
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda Puntland. Safarkaan oo noqon doona kii ugu horeeyey ee madaxweynuhu kaga boxo magaalada Garoowe tan iyo markii la doortay 8 January ayaa waxaa ku wehelin doona xubno katirsan golayaasha dowladda, saraakiisha ciidanka iyo saraakiil ka socda aqalka...
Madaxweynayaasha Turkiga & Maraykanka oo go’aan ka gaaray xaalada Suuriya
ISTANBUL(P-TIMES)- Madaxweynaha Dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhiggiisa Dalka Maraykanka Donald Trump ayaa kawada hadlay qorshaha ay xukuumadda Washington ciidamadeeda kaga saaraysa Suuriya. Labada hoggaamiye oo khadka Taleefonka kuwada xiriiray ayaa isku raacay in dib u soo celinta ciidamada Maraykanka ee Suuriya ay tahay ay muhiim u tahay danaha labada dhinac. Waxanay si wada jir ah ugu...
Madaxweynihii hore ee Galmudug oo si kuluul uga ka hadlay khilaafka Somalia & Kenya
MUQDISHO(P-TIMES)- Iyada oo weli ay taagan tahay xiisada Siyaasadeed ee u dhaxeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa si kulul uga hadlay Siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed marna Wasiir ka soo noqday Dowladii Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka mid ah dadka sida kulul uga hadlay xiisadaas iyo jawaabtii...
DAAWO:Sheekh Kenyaawi oo khudbad xasaasi ah u jeedinaya shacabka Garowe
MUQDISHO(P-TIMES)- Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degaanka Ilbaq oo hoos yimaada degmada Balcad kolonyo ka tirsan ciidanka AMISOM ayaa qarax lagula eegtay deegaankaasi xilli ay ka yimaadeen dhinaca magaalada Jowhar. Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa uu qabsaday mid kamid ah gaadiidka ciidanka AMISOM sida ay ku warameen goob joogayaal. Ilaa hadda si dhab ah...
Faah faahino kasoo baxaya dagaal madaafiic & hub culus la isku adeegsaday oo ka dhacay deegaanka…
MUQDISHO(P-TIMES)- Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacay deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, kaasi oo gaystay khasaare kala duwan. Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay u sheegeen in dagaalkaasi uu yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen Saldhig Ciidamada dowlada ku leeyihiin deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabeellaha...